Qaar ka mid ah Isimada Puntland oo sheegay in ay qaadaceen shirka Turkiga(Dhageyso)
May 29, 2012 - Written by Garoowe:-Waxaa dhawaan shir ay ku yeesheen magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntlland Isimadii dhwaan ku soo laabatay magaalada Muqdisho si ay wadatashi ula yeeshaan madaxda dowllada Puntlland ay maanta shir jaraaid oo ay qabteen iyo baayaan ay soo saareen ay ku qaadaceen shirka ka socda dalka Turkiga .
Isimada Puntlland oo bayaanka ay soo saareen uu akhriyey Suldaan Bashiir Muuse Koonte uu ku sheegay in hanaankii shirka Turkiga lamarin habaabiyey sidaas darteedna ay qaadaceen oo ay taageersan yihiin go,aankii ay dowllada Puntlland ay ka diiday shirka ka socda dalka Turkiga.
Kulanka ka dhacay magaalada Garoowe ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 18 Isim oo ka mid ahaa Isimadii dhawaan ka soo laabtay shirkii looga hadlayey Dastuurka ay DFKM loo samaynayey iyagoo sheegay in sababaha ay shirka Muqdisho uga soo baxceen ay ahayd in aysan jirin ajando iyo wax diyaar ka ah arrinta Dastuurka oo buuq badan uu ka taagan yahay ilaa hadda.
Bayaanka oo qoraal ah oo ay soo saareen Isimada Puntlland hoos ka akhriso.
Hoos ka Dhageyso Bayaanka Isimada Puntland